तपाईं आफ्ना गल्ती घटाउन चाहनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस् — Sanchar Kendra
काठमाडौँ । कतै तपाईंको हतारमा बिर्सने वा बारम्बार गल्ती गर्ने बानी त छैन ! आत्तिनुपर्दैन। नियमित ध्यानको अभ्यासले तपाईंको यो बानी सुधार आउन सक्छ। अमेरिकाको मिसिगन स्टेट युनिभर्सिटीको पछिल्लो अनुसन्धानले ध्यानको नियमित अभ्यासले कुनै पनि व्यक्तिको गल्ती गर्ने आदत घटाउन मद्दत पुग्ने देखाएको छ।
पछिल्लो समय माइन्डफुलनेसले आममानिसको ध्यानाकर्षण गरेको छ। त्यही सन्दर्भमा लिनले रिसर्चरको सानो टिम बनाएर न्युरोवैज्ञानिक पद्धति अपनाएर ध्यानको मनोवैज्ञानिक र कार्यदक्षता प्रभावबारे अध्ययन गरिरहेका छन्। (साइन्सडेलीबाट भावानूदित)